Maxay tahay sababta Wasiir Jamaal uga qeyb galeyn Shirka Wadatashiga Puntland - Jowhar Somali Leader
Home Somali Maxay tahay sababta Wasiir Jamaal uga qeyb galeyn Shirka Wadatashiga Puntland
Maxay tahay sababta Wasiir Jamaal uga qeyb galeyn Shirka Wadatashiga Puntland
Wasiirka Qorsheynta Qaranka ee Xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka baaqsaday ka qeyb galka shirka Wadatashiga Puntland ee lagu wado inuu maanta oo Axad ka furmo magaalada Garowe.
Wasiir Jamaal ayaa noqday Wasiirka kaliya ee Puntland ku matala dowladda Federaalka oo aan shirkaas tagi doonin, sababo la xiriira khilaaf si gaar ah uga dhaxeeyo Madaxda Puntland iyo tabasho la sheegay in beeshiisa qabto.
Labadii maalin ee la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Garowe gaarayay wafuud isugu jira Wasiiro ka tirsna Xukuumadda, Xildhibaano labada Gole iyo siyaasiyiin oo ka baxay Muqdisho, si ay uga qeyb galaan shirka uu iclaamiyay Madaxweyne Saciid Deni.
Mr Jamaal oo ka mid ah Wasiirada aadka ugu dhow Madaxweyne Farmaajo ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay khilaafkii Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland C/xakiin Dhoobo Daareed iyo Madaxweyne Deni ee aakhirki dambe keenay in xilka laga tuuro Mr Dhoobo Daareed.
Sidoo kale Wasiir Jamaal ayaa horay uga carooday tallaabadii maamulka Puntland ku xiray xafiis uu ka furtay deegaan doorashadiisa oo ah degmada Dhahar ee Gobolka Sanaag bishii October ee sanadkii 2019.
Si kastaba ha ahaatee Wasiir Jamaal ayaa la sheegay in si gaar ah dadka uu siyaasadda ku matalo kula taliyeen in aanu ka qeyb gelin shirkaas, illaa laga xaliyo tabasho beeshiisa ka qabto Puntland iyo dhacdooyinkii siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada Puntland.